Y SERIES MOTORS - gooyeyaal, goos goos goos ah, dixiriga dixiriga, jaangooyooyinka meeraha, xawaare yareeyayaasha, kala duwanaanshaha, maareynta helical, gearsooyinka bevel sprial, gearboxes-ka beeraha, cagafyada gawaarida, gearsooyinka xamuulka, dirxiga gooryaanka
Bogga ugu weyn / motor / Y SERIES MOQDISHO
Y taxane Motors
Y matoorrada taxanaha ah waa matoorro hooseeya oo saddex waji leh asynchronous, kuwaas oo taxane aasaasi ah u ah ujeeddada guud. Mashiinadan taxanaha ahi waxay la kulmi karaan shuruudaha guud ee ujeedooyinka matoorrada gudaha iyo dibaddaba oo leh qaab u dhexeeya 80 illaa 315. Mashiinnada taxanaha ah ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo heerka qaran ee midaysan. Y matoorrada taxanaha ah waxay leeyihiin faa'iidooyinka waxtarka sare, keydinta tamarta, waxqabadka wanaagsan ee hawlgalka, gariirka yar, buuqa hoose, nolosha muddada dheer, kalsoonida sare iyo dayactirka fudud Cabirka sii kordhaya iyo heerka darajada gabi ahaanba waxay waafaqayaan heerka IEC. Waxay ku jiraan dahaadhka fasalka B, shahaadada IP 44 ee ilaalinta iyo habka qaboojinta ee IC411. Danab lagu qiimeeyo iyo ningax inta jeer ee taxanaha Y yihiin siday u kala horreeyaan 380v iyo 50HZ. Y ku xirnaanshaha waxaa loo ansaxiyaa matoorrada ka hooseeya 3kw (3kw ayaa lagu daray) iyo △ iskuxirka waxaa loo qaatay kuwa kore 4kw (4kw ayaa lagu daray). Y matoorrada taxanaha ah waxaa badanaa lagu adeegsadaa qalabka mashiinnada iyada oo aan loo baahnayn shuruudo gaar ah.
Y SERIES TAARIIKHDA FARSAMADA